Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo : “Andraikitry ny tsirairay” -
AccueilRaharaham-pirenenaAdy amin’ny tsy fanjarian-tsakafo : “Andraikitry ny tsirairay”
Mahery vaika ny ady amin’ny tsy fanjariantsakafo natrehina hatramin’izay ary mbola ady lehibe no miandry an’i Madagasikara mba handresena ity aretina mikiky mangina ny firenena ity. Mikiky mangina misy fiantraikany lehibe eo amin’ny tanjaka ara-toekaren’ny firenena satria vesatra ho an’ny firenena Malagasy ny reny sy ny zaza tratry ny tsy fanjarian-tsakafo, noho ny, fandaniana be mianjady eo amin’ny fanjakana amin’ny fandraisana an-tanana ny tsy fahasalamana aterak’izany. Ankoatra ny tsy fitomboana ara-batana, marihina fa, eo koa ny tsy fitomboana ara-tsaina. Ao anatin’ny ady atao indrindra, mametraka ho laharam-pahamehana izany ny fitondram-panjakana ary efa mipetraka ny fahavononana rehetra entina miatrika izany. Ary noporofoin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, izany omaly, teny amin’ny CCI Ivato, tamin’ny fanatrehana ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny paik’adim-pirenena andiany faha-III ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, nokarakarain’ny ONN niarahana tamin’ny Praiministra lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Olivier Mahafaly sy ireo mpikambana sasantsasany ao aminy, ireo mpiara-miombon’antoka ary ireo mpisehatra amin’ity ady ity. Tanjona, ny hampihenana ho 47 isan-jato hatramin’ny 38 isan-jato ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mandra-pahatonga ny taona 2021.
Ity ady atao izay fitohizana sy fanamafisana ny lahatr’asa efa natao sy fametrahana paik’ady mafy fototra izay niainga tamin’ireo antontan’isa azo sy ny fanadihadiana natao. Namafisin’ny Filoha fa tena laharam-pahamehana ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo satria taratry ny fahantrana. Noho izany, “tsy maintsy hampandrosoina ara-toekarena ny firenena amin’ny fampitomboana ireo vokatra azo hohanina, indrindra ny fambolem-bary satria ilaina ny fahampiana ara-tsakafo. Fa ny tena zava-dehibe ny fahatsaran’ny sakafo amin’ny fampahafantarana ny olona ny sakafo ilaina”, hoy ny fanambaran’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Rajaonarimampianina Hery. Manan-danja lehibe amin’ny fanafoanana ny tsy fanjarian-tsakafo ny haino aman-jery hoy ny Filoha: “ ilaina ny serasera mba hampahafantarana ny olona izany tsy fanjarian-tsakafo izany. Ny fampianarana sy fitaizana ny reny sy ny zaza momba ny tsy fanjarian-tsakafo ary ny fametrahana foto-drafitr’asa mahakasika izany koa dia zava-dehibe. Raha fintinina dia andraikitry ny tsirairay ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo”. Namafisiny fa tsy andraikitry ny fitondram-panjakana irery ity ady atao ity fa andraikitry ny tsirairay ka nisy ny fanentanana nataony ho an’ny olona rehetra eo amin’ny fampahafantarana ny tokony hatao hiatrehana sy hiadiana amin’izany. Tafiditra amin’izany ny fampandrosoana ny fambolena, ny fitarihana rano fisotro madio izay iankinan’ny fahasalamana be indrindra.
Ao anatin’izany indrindra, nisy ny fandraisana andraikitra noraisin’ny ministera telo entina hanafoanana tanteraka ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Dia ny ministera ny Fahasalamam-bahoaka, ny ministeran’ny Rano, angovo ary ny solika, ary ny ministeram-panjakana miadidy ny Fambolena sy ny Fiompiana. Fa ankoatr’izay, nampanantena ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny Praiministra Solonandrasana fa hanokana tetibola goavana hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo amin’ny taona 2018 ary hitombo avo telo heny amin’ny vola efa nampiasaina amin’izany. Marihina fa vola maherin’ny 400 tapitrisa dolara no ilaina hanafoanana ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara.
Nohamafisin’ny fanambarana ofisialy avy amin’ny fitondram-panjakana, tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny andrim-panjakana fa tanatin’ny fanarahan-dalàna tanteraka ny fikirakirana ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Mba hialana amin’ny tsaho isan-karazany momba ity raharaha ity moa ...Tohiny